कोरोना बिरुद्धको ‘लडाई’मा कस्तो छ गुर्भाकोटको तयारी ? - Arthapage
कोरोना बिरुद्धको ‘लडाई’मा कस्तो छ गुर्भाकोटको तयारी ?
प्रकाशित मितिः May 6, 2020 May 6, 2020
पश्चिम नेपालको प्रमुख नाका नेपालगन्जमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कर्णाली प्रदेशमा जोखिमरहित रहेन । कर्णालीमा हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएको भए पनि ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन ।
नेपालगन्जमा कोरोना संक्रमण देखिनासाथ कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलवारदेखि सात दिनसम्मका लागि प्रमुख नाकामा आवातजावत पूर्णरुपमा बन्द गरेको छ ।
बबई, कपुरकोट लगायतका कर्णाली प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अब सवारीसधान मात्र नभई पैदल यात्रा समेत गर्न नदिइने प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
कर्णाली प्रदेश धेरै कुरामा नेपालगन्जसंग निर्भर छ । त्यहाँ कोरोना देखिएपछि कर्णालीमा जोखिम बढ्नु स्वभाविक नै हो । अझ सोही नाका हुँदै कर्णाली प्रदेशका गाउँ -गाउँमा ठूलो संख्यामा मानिसहरु घरमा पुगिसकेका छन् । त्यसले चिन्ता थपिदिएको छ । यद्यपी गुर्भाकोट नगरपालिकामा हामीले बाहिरबाट आएकाहरुलाई निगरानीमा राख्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं ।
३ सय १८ जनालाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण पछि घर पठाएका छौं । घरमा गए पनि उहाँहरुलाई निगरानी गरिरहेका
छौ । अहिले पनि २ सय जतिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेका छौं । यो हिसावले अहिलेसम्म हामी सुरक्षित नै छौं । तर चुप लागेर बस्ने अवस्था भने छैन । एउटा त हामीले कोरोना बिरुद्धको तयारी गरिरहनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ यस्तो बेला आइपर्ने बिभिन्न समस्या समाधानको पहल गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने छ ।
प्रदेशका सबै नाका बन्द भएपछि कर्णालीमा खाद्यन लगायतका सामाग्रीको अभाव हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तो समस्या आउन नदिन हामी यहाँका व्यवसायीसंग निरन्तर छलफलमा छौं । यसअघि हामीले यहाँका कोही पनि लकडाउनका बेला भोकै बस्न नपरोस् भनेर राहत बितरण गरेका थियौं । अब पनि त्यस्तो समस्या आउन नदिने काम भइरहेको छ ।
हाम्रोमा अर्को समस्या भनेको स्वास्थ्यकर्मी लगायत उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामाग्रीको अभाव छ । आइसोलेशन बेड मेहलकुना अस्पतालमा छ । स्वास्थ्य सामाग्रीको परिपुर्ती र आइसोलेशनलाई सूविधासम्पन्न बनाउनेतर्फ सहयोग मागिरहेका छौं । स्वास्थ्य परीक्षणका काम भएकै छन् ।
हामीले स्वास्थ्य सामाग्री नेपालगन्जबाट मगाउथ्र्यौ अहिले त्यही समस्या देखिएपछि थप समस्या भएको छ । यस्तो बिपद् पहिलो पटक व्यहोरिरहेका छौं । पक्कै पनि व्यवस्थापनमा समस्या त हुन्छ नै । तर त्यसो भन्दैमा चुप लागेर बस्ने कुरा पनि भएन । हामी कुनै कुरामा कमजोरी नहोस् भन्नेमा निकै गम्भीर छौं । हरेक कुराको सामना गर्न तम्तयार भएर बसेका छौं ।
कर्णाली प्रदेशको बिपद् व्यवस्थापन समितिको मंगलवार बसेको बैठकले २५ ठाउँमा बिशेष चिकित्सकको टोली पठाउने निर्णय गरेको थाहा भएको छ । आशा छ सबै ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सामाग्री र स्वास्थ्यकर्मी पठाइने छ ।
यो महामारीका बिरुद्ध लड्नका लागि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छु । सक्रियतापूवर्क काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी एवं आम दाजुभाई तथा दिदी बहिनीलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा छ ।
प्रकाशित मितिः 7:55:29 AM |
Prevकृषकको घरदैलोमा पुग्दै मन्त्री बिमला केसी, भन्छिन्- रोगसंगै हुनसक्ने भोकको समस्या टार्छौ
Nextनेपालगन्जमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन यस्तो छ प्रदेश सरकारको तयारी